Baanuyaal Caydhoobay Buugii Aabihii Buu Baadh-baadhaa – Rasaasa News
Aug 11, 2010 ethiopia, Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo, Ogaden, ONLF, UWSLF
Kooxda Jwxo-shiil, oo awal horeba been naftooda ku maaweelin jiray iyo yeydaan caajisin, ayaa calamo ayna daacad ka ahayn, caruur iyo haween ku ciyaarsiin jiray cishooyinka feestada ah, qolal ay xoogaa shilimaad ah kaga uruursan jireen.
Kooxda ayaa waxaa sanooyinkii ugu dambeeyeyba fara ba,an ku haysay faham kaga imanayey xaga dadweynaha, waxaana loo cidleeyey goobihii ay lacagata kaga guran jireen dadweynaha, waxaa kale oo laga caajiyey qaaraamaadkii ay qoysaska kaga guri jireen qaraabonimada.
Hadaba, si ay dadka u ceshadaan ayey baryihii dambe bilaabeen meel walba oo ay isugu yimaadaan in ay baryo ku keenaan fanaan Somaliyeed si ay ugu camiraan oo ay heeso ugu qaadaan shir beenaadka.
Meelaha ay isugu yimaadaan ayey ugu yeedhi jireen shir, wax kaliya ee lagu soo bandhigaana waxay ahaayeen fanaaniin heesaysa. Jwxo-shiil, laftigiisa waxaa uu daawadaa heesaha, isaga oo awal hore lagu timaami jiray in uu yahay dadka xidhxidhan [conservative]. Dani waa seetee waxay la gashay in ay isaga iyo caruurtu isku si u daawadaan heesaha fanaaniinta.
Arimihii heesaha ayaa eega u shaqayn la,a waxaana uu wali jecel yahay in uu yidhaahdo shir baa la qabtay iyo arimo naf ku meermeeris ah. Waxayna soo bandhigaan sawiro iyo qoraalo laga joogo saddex sano iyaga oo kaliya badalay ciwaanada, ceebeey tacaal waa meesha ay Somalidu ka tidhaahdo “baaniyaal caydhoobay buugii Aabihii buu baadhbaadhaa.”
Ruuxu kolka uu hanti badan lahaa ee uu caydhoobo, waxaa uu dib u dhawr dhawraa buugaagtiisii hore bal in uu ka helo ruux uu dayn ku lahaa oo uu ilowsan yahay halkaas ayey maahmaahdu ka timid.
Eegga kooxda Jwxo-shiil, way ku kaliftay in ay waxyaabo hore u dhacay ay Internetka soo dhigaan, xitaa waxay kari waayeen isku kabkabkii ay awal hore samayn jireen.
Fadlan fiiriya bal boggagooda, waan hubaa in kuwii qori jiray ayna fayoobayn.
Bishii Barakada iyo Khayrka oo Bilatay [Ramadaan Kariim]